ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီး ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner နှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး ဆွေးနွေး - Ministry of Education
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးသည် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ တွင် ဩစတြေးလျနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner နှင့် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍ အပေါ်သက်ရောက်မှုများ၊ လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့်ကိစ္စရပ်များအပေါ် အမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကဏ္ဍ ကိုဗစ်-၁၉ အမျိုးသားတုန့်ပြန်ရေးနှင့် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးအစီအစဉ် (Myanmar COVID-19 National Response and Recovery Plan for the Education Sector) အကောင်အထည်ဖော်မှုအခြေအနေ၊ No Learning Loss ဆိုသည့် မူဝါဒနှင့်အညီ ကိုဗစ်ကာလအတွင်း သင်ယူမှုမဆုံးရှုံးရေးအတွက် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် ရေဒီယိုမှ သင်ယူမှု၊ အွန်လိုင်းသင်ယူမှု၊ နေအိမ်အခြေပြုသင်ယူမှုနှင့် အင်တာနက်မရနိုင်သောဒေသများ တွင် DBE Box နှင့် DBE Stick ဖြင့် သင်ယူမှုများ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေ၊ အမျိုးသား ပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲမည့်အစီအစဉ်နှင့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲရှိသည့်ကျောင်းသားများအတွက် လူတိုင်းအကျုံးဝင်ပညာရေး အကောင် အထည်ဖော်မှုအခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရမှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာရေးတွင် ထောက်ပံ့ပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် ဩစတြေးလျ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော Decentralizing Funding for School Program (DSFP), Myanmar Education Quality Improvement Program (My-EQIP), Strengthening Pre-Service Teacher Education in Myanmar (STEM) Program နှင့် Teacher Competency Standards Framework (TCSF) Program များသည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပညာရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အလွန်အရေးပါသောစီမံကိန်းများဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဩစတြေးလျ၏ အခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ပါဝင်ပံ့ပိုးလျက်ရှိသော Global Partnership for Education (GPE) Funding နှင့် Inclusive Access for Quality Education (IAQE) တို့မှာလည်း ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ No one left behind ဆိုသည့် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလွန်အရေးပါသော ကူညီထောက်ပံ့မှုများဖြစ်ပါသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားရာ သံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပံ့ပိုးကူညီခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းနှင့် လိုအပ်သောအကူအညီများ ဆက်လက် ပံ့ပိုးပေးရန် ဩစတြေးလျနိုင်ငံက အသင့်ရှိပါကြောင်းဖြင့် ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Total Hits : 1142136403